Hurumende Yese Iri: Revival uye Reforms muIndia Aviation
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Hurumende Yese Iri: Revival uye Reforms muIndia Aviation
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Vadivelu Comedy India Aviation
India indasitiri yendege, kusanganisira ndege, nhandare, nehumwe mabasa, vauya pasi pekushushikana kwezvemari nekuda kwe COVID-19 denda.
Hurumende yeIndia yakayera matanho ekumutsiridza chikamu chevashandi vehurumende veIndia.
Vanenge maR. 25,000 macrores anofanirwa kushandiswa mukukura nekusimudzira chikamu chevashandi vevashandi vehurumende mukati memakore mana kusvika mashanu anotevera.
Mabasa epamba izvozvi asvika anosvika makumi mashanu muzana ezviuru zve pre-COVID, uye huwandu hwevatakuri vezvinhu hwawedzera kubva pa50 kusvika pa7.
Gurukota reHurumende muIndia Ministry of Civil Aviation, General (Retd.) Dr.VK Singh, vataura mumhinduro yakanyorwa kuna Shri MV Shreyams Kumar muRajya Sabha nhasi kuti mhedzisiro yakakosha yanga iri kunyangwe hosha iyi.
Iwo madanho ematanho makuru akatorwa nehurumende kumutsidzira boka revashandi vezvemhepo panguva iyi, ari, pakati pezvimwe zvinhu, seinotevera:
Ipa rutsigiro kunhandare yendege kuburikidza nematanho akasiyanasiyana emitemo.
Govera nhandare yendege kuburikidza neAirport Authority yeIndia uye nevashandisi vega.
Kukwidziridzwa kwekudyara kwakazvimirira munhandare dziripo uye nyowani kuburikidza nenzira yePPP.
Ipa anoshanda Mhepo Navigation Sisitimu.
Kubudikidza neMweya Bubble Kurongwa, kuyedza kwakaitwa kuve nechokwadi chekuenzanirana uye zvakaenzana kurapwa kune vatakuri vedu mubazi renyika dzese.
Zvivakwa neMitero Mutero (GST) mwero wakadzikiswa kusvika pa5% kubva pa18% yezveMabasa ekugadzirisa, Kugadzirisa uye Kupedzisa (MRO).
Inogonesa nendege yekubhadhara uye yemari nharaunda yakagoneswa.
Nzira yekugadzirisa muIndia airspace mukubatana pamwe neIndia Mhepo YeMhepo yekushandisa zvine hungwaru nzvimbo yekufambisa, nzira pfupi uye kuderera kwemafuta.
Kufambidzana nevane chekuita kugadzirisa nyaya.
Hurumende yatorawo matanho akati wandei ekugadzirisa zvinhu mubazi rezvekufambisa ndege yenyika nekupa zvivakwa zvepamusoro nezvivakwa. Kukwidziridzwa kwekudyara kwakazvimirira munhandare dziripo uye nyowani kuburikidza nenzira yePPP yaitika.
Gunyana 21, 2021 pa 01: 34
شات العراق شات عراقيات شات بغداديات دردشة عراقية